Wararkii ugu dambeeyey xaaladda suuqa ee ciyaaryahan Neymar Jr… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
(Paris) 24 Luulyo 2019. Sida wararku ay sheegayaan Neymar Jr ayay u badan tahay inuu sii joogi doono kooxdiisa PSG ee ka dhisan caasimadda Waddanka Faransiiska.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay u badan tahay inay si haystaan xiddigooda Neymar ugu yaraan xilli ciyaareed kale.
Labo sano kaddib markii uu garoonka Parc des Princes ugu soo dhaqaaqay lacag rikoorka adduunka ah, Neymar ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona, kuwaasoo sidoo kale sheegay inay doonayaan inay la saxiixdaan xiddigan reer Brazil.
Yeelkeede, dhaqaalaha heshiis kasta ayaa wali ah carqalad wayn, iyadoo PSG aysan dooneynin inay u ogolaato Neymar inuu kooxda kaga tago wax kasta oo ka yar 200 milyan oo gini oo ay ka soo bixisay xiddigan sanadkii 2017-kii.
Sida uu warinayo Warsidaha L’Equipe, wadahadallada ayaa gaaray heer ay sii kordhayaan, iyadoo ay macquul tahay in Barcelona ay ku guuldarreysato inay gacanta ku dhigto Neymar Jr oo uu xilli ciyaareedyo kale ku qaato dalka Spain.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan inaysan jirin wax laga baddelay dalabkoodii furitaanka ee ahaa 40 milyan oo euro oo u dhiganta 35.76 milyan oo gini oo lagu daray Philippe Coutinho iyo Ivan Rakitic, iyadoo aysan jirin haatan wax xiiso ah oo ay u qabto kooxda heysata horyaalka Ligue 1 inay iska dirto laacibkan.
Neymar kaasoo xiddigaha kooxdiisa PSG ula safray qaaraadda Aasiya ayaa weli gacanta ku haysta heshiis saddex sanadood ah oo kaga harsan qandaraaska uu ku joogo caasimadda Faransiiska.
Manchester United oo maalmo kooban u qabatay kooxda Inter Milan si ay u dhammaystiro saxiixa Romelu Lukaku